Shiinaha Farsamooyinka Cusub ee Udgoon Faytamiin C Maydhaha Warshadeeya iyo Soo-saaraha | Xinpaez
Tiknoolajiyad Cusub Udgoon Faytamiin C Maydh Fiilter ah
6 Udgoonada AROMA - Kaa caawiya inaad nasato jirkaaga daalan iyo maskaxda culeyska badan
MAQAALKA & Timaha KORINTA - wuxuu hagaajiyaa qoyaanka, soo kabashada, caddeynta, iyo dabacsanaanta maqaarka
VITAMIN C - Maadada fitamiin ee laga helo fiitamiin jel ayaa baabi'in doonta 99.9% koloriin haraaga ah Waxayna leedahay saameyn antioxidation ah waxayna fitamiin siineysaa maqaarkaaga
SHAQAYNTA wax ku oolka ah - Waxay ka saartaa miridhku & walxaha waxyeelada leh biyaha qasabada si wax ku ool ah
Cabirka: 133 * 46 MM
MOQ: 50 Cadcad
Qalabka Shell: Polycarbonate (PC)
Feature: Udug Faytamiin C
Shell "Transparent Metal"
Ka hadalka Waxyaabaha Filter Shell Shell, Isbarbar dhigga PC-ga iyo ABS, PC ayaa ah caagga ugu fiican ee u adkeysiga u adkaysta. PC-ga waxaa iska leh caagagga injineernimada oo leh qiime aad u sarreeya, laakiin PC wuxuu leeyahay aalado koronto oo heer sare ah iyo qalab farsamo, gaar ahaan caabbinta saamaynta, adkaanta sare, kala duwanaanta heerkulka hawlgalka ballaaran (-100 ～ 130 ℃) iyo daahfurnaan sare (oo loo yaqaan "Transparent metal"), aan sun ahayn, si fudud loo farsameeyo loona qaabeeyo. Kaliya ma beddeli karto qaar ka mid ah biraha, laakiin sidoo kale galaaska, qoryaha, iwm PC-ga uma adkeysana hydrolysis, caabbinta kuleylka PC-ga waa qiyaastii 130, ABS iska caabin kuleylka 80 darajo, waxqabadka guud ee PC ayaa ka fiican.
Faytamiin C waxaa loo isticmaalaa miiraha musqusha, maxaa yeelay wuxuu iska caabin karaa fallaadhaha ultraviolet-ka illaa xad, hagaajinta xaaladda dhibcaha madow iyo xarkaha, sidaa darteed waxay leedahay saameyn caddeyn ah. Waxyaalaha daryeelka maqaarka ee hodanka ku ah fitamiin C waxay ka caawin kartaa maqaarka inuu iska caabiyo shucaaca ultraviolet ee xagaaga, wuxuu kobciyaa dheef-shiid kiimikaadka, wuxuuna iska ilaaliyaa dhibco madow iyo baro midab leh. Xilliga jiilaalka, waxay wanaajin kartaa caajis la'aanta wareegga dhiigga ee maqaarka maqaarkiisa, si aad adiguna u ahaato mid cad oo dhalaalaya xilliga qaboobaha.
Ka dib markaad ku qubeysato shaandhadaan, wejigaaga wuxuu dareemayaa sibiibix ah maqaarkaaguna wuxuu dareemayaa wax-tar. Waxyaabaha qoyaanka maqaarku si weyn ayey u kordhin doonaan isticmaalka ka dib.
Sifee la beddeli karo
1.Waxaa ku jira fitamiin C, 45000mg ， oo ah 800 jeer oo liin dhanaan ah. Mar alla markii ay biyuhu soo galaan, waxay siineysaa ficil aad u ballaaran C. Sida iska cad ka saarista koloriin.
Saamaynta 2.Moisturizing waxay ku siinaysaa maqaar jilicsan, jilicsan iyo qoyaan.
3. Yaree buuqa iyo daalka.
Ka saarista koloriin waa lagama maarmaan
Chlorine-ka hadhay ee ku jira biyaha qasabada ayaa si fudud hawada looga sii daayaa inta lagu jiro qubeyska waxayna ku sii jirtaa musqusha hawada aan joogin. Maydhashada tobanka daqiiqo waxay lamid tahay cabitaanka 1L oo biyo ah. Xaqiiqdu waxay tahay in qadarka koloriin ee laga nuugo hawada inta lagu jiro qubeyska ay ka badan tahay cabitaanka.
Sidee fiitamiin C u shaqeeyaa?
Waa habka dhexdhexaadinta. Faytamiin C waa kiimiko leh dib-u-habayn sidaa darteed waxaa looga dhex saari karaa koloriin. Faytamiin C wuxuu yareyn karaa Cl2 ilaa Cl-, kaasoo oksidis ku gala oksijiin fitamiin C kaligiis. Falcelintan waa in lagu sameeyaa biyo, saameyntuna kuma fiicna xaalad adag.
Xudunta miiraha ee qolofta dhexdeeda waa la beddeli karaa. Marka xudunta miiraha la isticmaalo, waxaan kaliya u baahanahay inaan bedelno xudunta shaandhada. Si uun, waxaan badbaadin karnaa lacag iyo tamar badan. Immisa jeer ayaan badaleynaa? Hagaag, waxay kuxirantahay. Guud ahaan marka la hadlayo, hal cunsur ayaa bixin kara nadiifin biyo ah 6000L, oo ​​loo isticmaali karo qoys ka kooban shan qof inay ku qubeystaan ​​ilaa hal bil.
OEM Waa la heli karaa
Moodelkani waa saxankayaga ugu muhiimsan ee laga soo saaro warshadeenna. Waan helnay summad laakiin kuma lifaaqin. Sababtoo ah waxaan ku siineynaa OEM midkan, oo ay ku jiraan noocyo kala duwan oo habeyn ah. Waxaan tusnaa nooc, inta ka hartayna booskaaga ayaa loo daayaa fikirkaaga, Logo, shaandhada walxaha iyo qolofka, wax walba waa la beddeli karaa. Haddii aadan wax fikrad ah qabin, waxaan leenahay koox u gaar ah nashqadeynta aan kula talino, dabcan sidoo kale waxaan leenahay keydka sidoo kale, fadlan dalbo amar haddii aad jeceshahay. Waqtigan xaadirka ah waxaan helnay shahaadooyinka MSDS iyo SGS ee tusaalahan muujinaya hoos. Waad ku mahadsantahay dulqaadkaaga ， sida aad halkan ku gaadhay. ^^
Rose, Lavender, Liin, Mint,
Ka saarista Koloriin
Hore: Madaxa Maydhista Kaarboon Fiber Fiber leh Filter
Xiga: Teknolojiyada cusub ee dhoobada gacanta lagu dhaqo ee dhoobada dhoobada leh filter
filter carafta carafta
Faytamiin C filter
Tiknoolajiyada cusub ee Cadaadiska Sare ee Shaandhaynta Gacanta
Madaxa Maydhista Kaarboon Fiber Fiber leh Filter
Fashion Water Saving Hand Maydho Madaxa
OEM udgoon Faytamiin C kaydadka shaandhada maydha
Wareeg / Off Off Chrome Madaxa Maydhashada Roobka
Cadaadis Sare oo ah Maydho Maydh - Chrome dahaadhay
Xuzhou Xinpaez Nadiifinta Biyaha
Shirkadda Xaddidan ee Equippment